Malik Sarr : « Vonona hanampy ny Malagasy ny Oif” -
AccueilRaharaham-pirenenaMalik Sarr : « Vonona hanampy ny Malagasy ny Oif”
Roa volana aty aoriana no nahavitan’ny Frankôfônia dia mbola tsy mitsahatra ny milaza ny fahombiazan’izany fihaonana an-tampony izany izao tontolo izao. Niharihary tokoa mantsy ny fahombiazan’i Madagasikara manoloana iny fihaonan’ny Frankôfônia iny, ary tsy nitsahatra niarahaba ny mpitondra fanjakana ireo vahiny mikambana ao anatin’ny Oif hatramin’izao. Ankoatra ireo firenena mivondrona ao anatin’ny fikambanana, nitondra ny fiarahabany ho an’ny mpitondra fanjakana ihany koa ny ambasadaoron’ny Oif, sady solontenam-paritra ny ranomasimbe Indianina, Malik Sarr. Ny sabotsy teo, ity farany no noraisin’ny Filoham-pirenena Rajaonarimampianina Hery, teny amin’ny Lapam-panjakana Iavoloha, ary amin’ny maha ambasadaoron’ny Frankôfônia azy eto Madagasikara no hahatongavany eto, araka ny filazany.
Tsy nisy tsy nilaza ny fahombiazan’ny Frankôfônia, hoy ity Ambasadaoro ity ary tonga niarahaba ny Filoha ny tenany. « Ny olon-drehetra dia niresaka ny fahombiazana lehiben’ ny fivoriamben’ny Frankôfônia avokoa. Tonga eto Madagasikara ny tenako amin’ny anaran’ny sekretera jeneraly, Michaëlle Jean, miarahaba ny Filoha noho izany fahombiazana izany. Tsara ny fihaonana an-tampony, fa ny ao aorian’iny fihaonana iny no tsara kokoa. Ary heverinay fa izao vao tena manomboka ny fihaonana eto Madagasikara, ka ny tanora sy ny vehivavy manomboka hahazo ny vokatran’izany fihaonana izany. Mahakasika ny famolavolana ireo rehetra tapaka ny Filoham-panjakana sy ny governemanta eto Madagasikara momba ny asa, fiofanana, kolontsaina ary ny fampandrosoana maharitra…”
Ankoatra izay dia nitondra ny fahavonany hanamafy ny fiaraha-miasa miaraka amin’I Madagasikara koa ity Ambasadaoron’ny Frankôfônia ity. “Tonga nilaza amin’ny Filohan’ny Repoblika koa ny tenako fa vonona hanampy ny firenena malagasy, ny Oif ihany koa izay vonona hatrany hanamafy ny fiaraha-miasa miaraka amin’i Madagasikara. Efa misy tetikasa maro efa an-dala-panatanterahana nandritra ny taonan’ny fihaonana an-tampony, nampiasa vola teo amin’ny sehatry ny sosialy sy ny toekarena ho an’ny vehivavy sy ny tanora any amin’ny faritra isankarazany izahay ary mikasa ny hanohy ny ezaka amin’ny herinandro manaraka eo”, hoy hatrany ity ambasadaoro ity.
Ela ny niandrasana ny fananganana ny Vohitry ny Frankofonia ary izao tafatsangana soa aman-tsara izao. Vohitra natao hanamafisana ny firahalahiana eo amin’ny firenena mielipaka manerana ny kaontinanta sy i Madagasikara. Tratra izao ny tanjona ary ...Tohiny